नयाँ बजेट : प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ३ अर्ब २३ करोड लक!
सविन मिश्र आइतबार, जेठ ४, २०७७, १३:४७
काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरी लाइन मिनिस्ट्री बजेटर सिस्टम (एलएमबिआइएस) इन्ट्री भएको छ। अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र परियोजनाबीचको छलफलपछि नयाँ बजेटका लागि यो रकम टुंगो लगाइएको हो।
नयाँ बजेटको अन्तिम तयारीमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले अहिले हरेक शीर्षकको बजेटलाई अन्तिम रुप दिइरहेको छ। यसैअन्तर्गत केही दिनअघि आयोजनाको लागि दिइने बजेटको पनि प्रारम्भिक टुंगो लगाइएको हो। यो रकममा अन्तिम समयमा केही थपघट भने हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीहरुले दिएको जानकारीअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा परियोजनाका लागि गरिएको विनियोजनभन्दा केही कम रकम एलएमबिआइएस इन्ट्री भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ र्अब ७५ करोड रुपैयाँ यही शीर्षकका लागि विनियोजन गरेको थियो। कृषि विकास मन्त्रालयलाई दिइएको २८ अर्ब ९ करोड मध्ये करिब १३ प्रतिशत बजेट यही परियोजनाका लागि दिइएको हो।
'आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको मोटामोटी टुंगो लागेको छ, यद्यपि बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दा अहिले निर्धारण गरिएको बजेट केही बढ्न वा घट्न सक्छ,' अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने। कोरोनाको संकट गहिरिँदै जाँदा अर्थ मन्त्रालयले सिलिङ घटाएर छलफल गर्न निर्देशन दिएकाले चालु वर्षको तुलनामा नयाँ बजेटका लागि विनियोजन हुने रकम घटाइएको हो।
संघीय सरकारबाट जाने अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा सिधै स्थानीय तहमा पुग्ने गरी बजेटको व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ। चालु वर्षसम्म प्रदेशमार्फत स्थानीय तहमा जाने गरी बजेटको व्यवस्थापन गरिएकोमा यसपटकबाट मोडालिटी फेर्न लागिएको हो।
बजेट निर्माणको दबाब : लोकप्रिय बजेट लेख्न ‘स्पेस’ थियो?
भन्सार वर्गीकरणमा ५७५ उपशीर्षक थपियो, रसायनिक मलमा कर लगाइएको हो?
के सलह नेपाल आउने सम्भावना कम छ? यस्तो छ संकट रोकथामका लागि सरकारको पूर्वतयारी ‘हाम्रो पुस्ताले नै यस्तो खालको समस्या भोगेको छैन। त्यसकारण कसरी संकट व्यवस्थापन गर्ने भनेर जानकारी लिन हाम्रै आग्रहमा एफएओका विज्ञह... शनिबार, जेठ १७, २०७७
बजेटमा अटेनन् कृषिमन्त्री भुसालले 'गुप्तवास'मा बनाएका कार्ययोजना भुसालले आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको पछिल्लो हप्ता कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गर्‍यो। लकडाउन जारी भ... शुक्रबार, जेठ १६, २०७७
कृषिमा बजेट : अर्गानिक उत्पादन र सिँचाईमा जोड नेपाली अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधारका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न भएको चुनौतीलाई मध्येनजर गर्दै सरकारले कृ... शुक्रबार, जेठ १६, २०७७